Intee in le'eg ayay Delta 9 THC Gummies-ka ugu shaqeeyaan xanuunka? • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Intee in le'eg ayay Delta 9 THC Gummies-ka ugu shaqeeyaan xanuunka?
albaabka daroogada January 19 2022
maqaal by daroogada January 19 2022
Marka dadka intooda badan ay maqlaan ereyga "THC" waxay isla markiiba ka fikiraan marijuana ee maaha Delta 9 THC Gummies. Waa marka dadku isticmaalaan marijuana inay la kulmaan farxad maskaxeed oo loo yaqaan "sare." Delta 9 THC waa molecule ka masuulka ah kan ugu awooda badan. Waxaa jira dhowr analoog oo THC ah iyo in ka badan ayaa la helay oo la baaray. Maqaalkan, waxaan uga hadlaynaa Delta 8 THC iyo kan cusub, ee u hoggaansan federaalka Ameerika, hemp-ka soo jeeda. Delta 9 THC Gummies!
1 Sidee bay cirridka Delta 9 THC uga shaqeeyaan xanuunka?
2 Wixii dhib ah, Delta 9 THC vs Delta 8 THC
3 Delta 9 THC Gummies waxay u shaqeeyaan xanuunka?
Tan iyo markii sharciga Beeraha ee 2018 uu u oggolaaday cilmi-baarayaasha inay tijaabiyaan fursado aan la tirin karin, imaatinka u hoggaansanaanta federaalka, Delta 9 THC waxay ahayd il sharaf weyn oo loogu talagalay xashiishadda iyo hormoodyada la xiriira hemp. Haa, Delta 9 ee aan soo sheegnay hadda waxaa laga soo saari karaa hemp gudaha xadka sharciga federaalka ee ka yar 0,03% THC miisaan qallalan oo hemp warshadaha.
Delta-9 THC Gummies waxaa ku jira 5 milligaraam oo Delta-9 THC ah iyo 25 mg oo CBD ah qiyaas kasta. Waxay xitaa diyaar u yihiin cananaaska, canabka iyo dhadhanka rummaanka. Alaabooyinka sida 10mg Delta 9 THC oo leh 200mg CBD - CBD waxay lagama maarmaan u tahay la dagaallanka walwal kasta ama calaamado aan fiicneyn oo Delta 9 THC ay ku keeni karto dadka qaar, taasoo ka caawineysa inay qadariyaan faa'iidooyinka caafimaad ee hemp!
Sidee bay cirridka Delta 9 THC uga shaqeeyaan xanuunka?
Cannabinoids sida delta 9 waxay qaban kartaa dhowr waxyaalood, oo ay ku jiraan xanuun joojinta. Ogaanshaha kuwa cannabinoids ka caawiya xanuunka sidaas darteed waa macluumaadka lagama maarmaanka ah ka hor intaadan iibsan badeecad. In kasta oo aynaan si buuxda u fahmin sida delta 9 u shaqeyso xanuunka, cilmi-baarayaashu way soo dhowaanayaan oo soo dhowaanayaan. Xanuunku wuxuu ku dhici karaa natiijada dhaawaca jirka ama maqnaanshaha dhaawaca jirka (xanuunka dhexe). Waxaa sababa dhaqdhaqaaqa isku-dubbaridan ee unugyada maskaxda, kaas oo sidoo kale nidaamiya xoojinta calaamadaha xanuunka.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, xanuunka dhimista iyo THC waxay si toos ah ugu xiran yihiin nidaamka endocannabinoid. Nidaamkan waxaa ka mid ah neurotransmitters, reseptors, iyo borotiinada laga helo jirka iyo maskaxda oo dhan. Nidaamka endocannabinoid (ECS) wuxuu mas'uul ka yahay ilaalinta dheelitirka gudaha wuxuuna qabtaa hawlo kala duwan oo kala duwan. Xanuunka iyo bararka ayaa ah laba ka mid ah qaybahooda ugu muhiimsan, waxayna door ka ciyaaraan labadaba. THC waa agonist ee maskaxda CB1 reseptors, kaas oo ku xidha reseptor-ka oo "shaqeeyaa". Goorma THC Marka la shaqeysiiyo, waxay u muuqataa inay leedahay saameyn liddi ku ah bararka iyo xanuunka. Soo-dhoweeyaha CB1 wuxuu ku xiran yahay dareenka "sare" ee ay keento firfircoonida THC.
Marka laga soo tago doorka ay ku leedahay yaraynta xanuunka, waa mid ka mid ah soo-dhoweeyayaasha ugu badan ee laga helay habka dareemayaasha iyo maskaxda waxaana loo yaqaanaa inay nidaamiyaan dhaqdhaqaaqa neerfaha iyo jawaabaha difaaca, iyo waxyaabo kale. Delta 9 THC waxay si toos ah u dhaqaajin kartaa CB1 reseptors waxayna daawaynaysaa xanuunka neuropathic iyadoo yaraynaysa xoogga calaamadaha xanuunka ee xudunta laf dhabarta iyo habayntooda maskaxda.
Wixii dhib ah, Delta 9 THC vs Delta 8 THC
Shaki la'aan waxaad ka fikiri doontaa kan wanaagsan haddii aad hadda u qaadatay delta 8 THC xanuunka.
Marka la soo koobo, dhammaan waxay kuxirantahay dhadhankaaga iyo guud ahaan dulqaadka raaxo darrada. Marka la eego saameynta ay ku leedahay xanuunka, delta 8 waxay heshay dareen ka yar kan delta 9. Inta badan cilmi-baaristu waa mid yar oo lagu sameeyay xayawaanka, laakiin aad u rajo badan. Labada cannabinoids waxay ku xiran yihiin CB1 reseptor ee maskaxda, oo ku xiran xakameynta xanuunka iyo bararka. Marka la eego saamaynta, delta 8 waa kala badh xoog badan sida delta 9 oo waxay keentaa mid ka jilicsan. Guud ahaan, Delta 8 waxay leedahay saameyn la mid ah Delta 9, in kasta oo ay aad u khiyaano badan yihiin.
Haddii aad rabto dareen dejin laakiin kor u qaadaya adigoo iska ilaalinaya sakhraan culus, delta 8 waa suurtogal. Cannabinoid Tani waxay leedahay sifooyin dejineed, taas oo ka dhigaysa doorasho ku habboon kuwa ay dhib ku qabaan hurdada. Welwelka ayay ka dejin kartaa qofka.
Delta 9 THC Gummies waxay u shaqeeyaan xanuunka?
Delta 9 THC waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee la bartay cannabinoids. Tiro yar oo tijaabooyin bini'aadmi ah ayaa muujinaya inay kaa caawin karto xanuunka iyo bararka. Marka lagu qaato qadar yar ama dhexdhexaad ah, cannabinoid Tani waxay ku siin kartaa gargaar weyn oo ka yimaada xanuunka joogtada ah. Delta 9 THC gummies waa nooca ugu horreeya ee buuxa ee cirridka hemp dabiiciga ah, oo leh dhammaan astaanta geedka hemp iyo qiyaasta saxda ah ee delta 9, waxaana aad loogu talinayaa.
Haddii aad ka fekereyso daaweynta CBD ee xanuunka arthritic ee daba-dheeraada, ama haddii aad hadda qaadanayso, kala hadal faa'iidooyinka, waxyeellada, iyo cilmi-baaristii ugu dambeysay ee bixiyeyaashaada daryeelka caafimaadka si aad u dejiso qorshe daaweyn habboon. Iyadoo ku xiran xanuunkaaga, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto inaad sii wadato qaadashada daawooyinkaaga caadiga ah, xitaa haddii aad qaadato alaabta CBD.
Xaruntan cusub ee alaabada CBD ayaa laga yaabaa inay ku caawiso…
Beerashada xashiishadda Kanada waxay horseed u tahay dariiqa toosinta…
Sharciga Thai: Saliida xashiishadda saafiga ah hadda ma ahan…